Netflix Miankina Teipp Trippy ho an'ny adaptation 'Brand New Cherry Flavor'
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Netflix Miankina Teipp Trippy ho an'ny adaptation 'Brand New Cherry Flavor'
by Waylon Jordan Jolay 19, 2021 1,616 hevitra
Flavor Cherry Vaovao dia mankany Netflix amin'ny volana manaraka ary farany manana ny teaser an'ny andiany noforonin'i Nick Antosca sy Lenore Zion miorina amin'ny tantara nosoratan'i Todd Grimson.
Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) kintana toa an'i Lisa Nova, mpamokatra horonantsary maniry fatratra, araka ny Deadline, “Manomboka amin'ny diany manova saina - manomboka amin'ny araben'i Beverly Hills ka hatrany amin'ny alan'i Brezila - valifaty tsy ampoizina. I Lisa dia Alice ao amin'ny Wonderland, saingy ny lavaka bitro no mitarika azy hidina amin'ny lalan'ny firaisana, majika, valifaty ary zanak'omby. ”
Manatevin-daharana mpilalao sarimihetsika miavaka i Salazar, ao anatin'izany i Catherine Keener (Mivoaha), Patrick Fischler (Sambatra!), Mark Acheson (Irery ao amin'ny maizina), Manny Jacinto (Ny toerana tsara), sy Hana Levien (Siren).
Ny andiany dia ahitana fizarana adiny valo ary hilatsaka amin'ilay goavambe streaming amin'ny 13 Aogositra 2021.
Arkasha Stevenson izay niara-niasa tamin'i Antosca sy i Ziona tamin'ny andiany SYFY Channel Zero voalaza fa nitarika ny fizarana voalohany.
Amin'ny maha-tantara azy, Flavor Cherry Vaovao manana ny fanarahana fombam-pinoana manokana ary hahaliana ny mahita ny fomba itondrana azy eo amin'ny efijery sy ny fandraisan'ny mpankafy ny loharano loharano ny fampifanarahana. Ny teaser dia toa mametraka ny feo mety amin'ny toerana misy azy ary ny manintona glamor eo amin'ny grit.
Araho hatrany ny iHorror raha mila fanazavana fanampiny momba Flavor Cherry Vaovao satria lasa misy izany ary ampahafantaro anay raha mijery ireo fanehoan-kevitra etsy ambany ianao!